Akshay Kumar Iyo Xaaskiisa Maxay Ka Siman Yihiin Arin Cajiib Badan Lamaanayaashana Dhiiri Galin U Noqon Karto – Filimside.net
Akshay Kumar Iyo Xaaskiisa Maxay Ka Siman Yihiin Arin Cajiib Badan Lamaanayaashana Dhiiri Galin U Noqon Karto
Twinkle Khanna waa gabadhii bilawgii qarnigaan dajisay Akshay Kumar oo loo yaqiinay “shabeel naagood” sababtana waxay ahed inuu ahaa atoore fudeed badan sido kalena gabdho badan xiriir la sameeyay balse markuu guursada waxuu noqday mid degen in badan.
Kumar waa mid kamid ah Ragga tusaalaha loo soo qaato dhanka nolosha lamaanayaasha caalamka xidigaan mashquul walba uu yahay waa mid waqti wacan qoyskiisa la qaato qaasatan xaaskiisa iyo caruurtiisa.
Safaro iyo dalxiis ayee wada aadaan sido kalena todobaad walba waxaa la arkaa iyagoo magaalka Mumbai dhex mushaaxayaan waxay noqdeen isaga iyo Twinkle kuwa tusaale u ah lamaanayaasha maanta wada nool.
Waxaa jiraan waxyaabo dhowr ah oo ay kawada siman yihiin Akki iyo xaaskiisa dabeecad ahaana kawada helaan aan u dayno Kumar oo ka sheekeynaya qodobada isaga iyo Twinkle kawada siman yihiin si wadajir ahn u wada sameyaan.”
“Aniga iyo Twinkle waxaan nahay laba qof oo kala duwan (abuur ahaan) balse dabeecad ahaan in badan waxaa jiraan waxyaabo aan kawada simanahay misane sameeyntooda aan kuwada faraxnao waxaana kamid ah.”
“Daawashada aflaamta si wadajir ah oo aan wada jecelnahay,sida inaan habeenkii xili hore wada seexano subaxiina xili hore soo kacno kadibna jimicsiga isku raacno, waxaan kaloo ka simanahay inaan wada jecelnahay socodka dheer inaan isku raacno oo lugaheena cabaar ku lugeyni (Gaari la’aan).”
“Hubaal ahaan laba qof hal ma noqon karaan balse anagga waxaan isku daynaa inaan dabeecadaheena hal kadhigno si cimrigeena inta kadhiman farxad ugu wada noolaano buuq la’aan hadii kale oo dabeecada kala duwantahay is faham dari lama weynaayo.”